Makuki madiki mameseji mafaera anoiswa pakombuta yako kana nharembozha paunopinda mawebhusaiti painternet. Makuki anobatsira Vashandisi kufamba vachitenderedza webhusaiti yedu uye vanotitendera kuti tigadzirise zvirimo zvesaiti yedu kuti zvienderane nezvinodiwa uye zvido zveVashandisi. Makuki atinoshandisa anowanzo unganidza zviziviso zvine chekuita nemudziyo wako, bhurauza, maURL epasaiti, nguva kana ruzivo rwemashandisirwo, Zvaunofarira Webhusaiti uye marongero. Pasina ivo, kushandisa webhusaiti yedu kwaizova chiitiko chinononoka, chakaoma uye chinoshungurudza. Makuki akajairwa kune ese mawebhusaiti ekambani. Saka kunyange zvisingagone kubviswa, isu tinoramba takajeka nezvechinangwa chekiki ichikupa iwe sarudzo yekubvuma kushandiswa kwavo uye kugadzirisa ma paramita avo.
Nei tichishandisa Cookies uye matekinoroji akafanana?
Isu tinotora mukana weruzivo rwakaunganidzwa kuburikidza nemakuki uye matekinoroji akafanana senge mabhikoni ewebhu (akamisikidzwa zvimedu zvedata mumaemail akananga kana mifananidzo kuchengetedza rekodhi yezviito zvako pane peji rewebhu kana email body) kukuziva, kunatsiridza kufamba kwepeji, rangarira zvaunofarira. , uye ndikuratidze zvinoenderana. Izvo zvakare zvinotibatsira kukwidziridza email uye ekushambadzira mishandirapamwe, uye inotitendera kunatsa yedu yekushambadzira nzira.
Ndeapi marudzi emakuki atinoshandisa?
Isu tinoshandisa makuki akasiyana siyana anosanganisira anotevera:Makuki anodiwa kwazvo kuti tive nechokwadi chekuti ruzivo rwaunowana kuburikidza neWebhusaiti Yedu rwakanyatso bhurwa uye ese Edu Webhusaiti anoshanda nemazvo.Makuki ekuita kuchengetedza rekodhi yemapeji eWebhusaiti Yedu yawakashanyira uye maURL akakuunza kuWebhusaiti Yedu. .Makuki eWebhusaiti kuti utarise zvaunoita panguva yebhurawuza. Chikamu chinotanga nguva yaunowana Webhusaiti Yedu uye inopera mushure mekunge wabuda Webhusaiti Yedu. Paunovhara bhurawuza, makiki edu epasesheni anobva angodzimwa.Kunangisa makuki kuti uunganidze analytics nezve mashandisirwo eWebhusaiti Yedu pamwe nemakuki emunhu wechitatu atinowana kuburikidza nemasocial media channels kana ads anoiswa pamaplatform evechitatu.
Ndeapi echitatu-bato makuki atinotora?
Ndokumbira utarisewo kuti isu tinogona kugonesa wechitatu-bato masevhisi kuti ateedzere Kuita uye Targeting makuki kuti isu tiyere kushanda kwemishandirapamwe yedu yekushambadzira uye kugara tichiziva nezve zviitiko zvako zvepamhepo paWebhusaiti Yedu. Iwo echitatu-bato masevhisi anogona kusanganisira asi asina kuganhurirwa kuGoogle AdWords, Google Analytics, nezvimwewo, uye anogona kunge ari pasi pemitemo yavo yeCookie, iyo yakanyorwa pamawebhusaiti avo anoshanda. ‍
Ndiani anogona kuwana iyo data yatinounganidza?
Isu tisu chete vabati ve data yakaunganidzwa. Inochengetwa yakavanzika uye yakachengeteka pasi pemirairo inotsanangurwa muChakavanzika Policy yedu. Nderipi data remunhu ratinounganidza? ‍ Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota tarisa kune yedu Yakavanzika Policy
Maitiro ekuvharisa maWebhusaiti edu makuki?
Kana iwe uchida kubvisa ese aripo uye anotevera maWebhusaiti makuki, unogona kuita izvi chero nguva nekuchinja browser yako marongero. Kuti uwane mamwe nhungamiro, ndapota enda ku www.allaboutcookies.org.Ndokumbira utarise: Kuvhara makuki kuchakanganisa ruzivo rwako uye kufamba paWebhusaiti Yedu. Kunze kwekunge wavharisa makuki mubrowser yako usati wasvika kuWebhusaiti Yedu, tinoisa makuki pakombuta yako kana zvishandiso kana washanyira Webhusaiti Yedu kana kudzvanya zvinongedzo zvinotungamira kwavari. ‍ Bata ruzivo iyo data yakagovaniswa, ndapota taura nesu kungave kuburikidza neWebhusaiti yekuonana fomu kana iyi email.